Sare Qaybinta Heerarka fikradaha ku saabsan sida Apple uu bedeli karo suuq-geynta SEO-ga ee deegaanka
Michael Brown, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiilka, ayaa sheegaya in Apple dhawaan ay bilawday jiilka 6aad iPhone oo ay la socoto qalabka soo socda ee Apple Watch. Inkastoo shirkado badan ay tijaabinayeen smartwatches, gelitaanka Apple ee tiknoolajiyada la xirxiray ayaa laga yaabaa inay tahay hab cusub oo wax qabad ah oo ay ka mid yihiin wareega ugu muhiimsan ee suuq-geynta SEO Marketing .
Hadda Apple ayaa u muuqata inuu doonayo inuu bedelo xeerarka SEO-ga maxaliga ah, haddii aad maamusho ganacsi maxalli ah, waa wakhti aad ku hagaajinayso habka cusub ee ganacsiga ay shirkadu u soo bandhigtay si ay kaaga caawiso inaad sii wado tartamadaada.
Apple Watch: Bixinta tiknoolajiyada la xirxiray ee u dhiganta
Smartwatches waxay socotay sanado badan. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah qalabkan ayaa lagu qabtay suuqa. Inkastoo qalabyada la xirxiray ay abuurtay xiiso, iibkooda iyo dib u eegistooda waxay ahaayeen kuwo kuleyl ah - afh 45-45. Laakiin taasi waxay ahayd ilaa intii la bilaabay Apple Watch. Isla markiiba, muuqaalka dhulku wuu isbeddelay, dadkuna waxay bilaabeen inay qaataan tiknoolojiyada la xiro si dhab ah.
Iyada oo muuqaalkeedu yahay kaaliyaha dijital ah ee codka leh, Apple Music, iyo Apple Play iyo sidoo kale barnaamijyo badan oo kale, Apple Watch ayaa bixisa macaamiisheeda lacag u dhiganta lacagtooda
Mid ka mid ah sifooyinka bixiyay Apple watch ah tartan tartan waa app cusub khariidad. Waa maxay sababta app tan muhiim ah? Muuqaalku waa u fiican yahay SEO-ga maxaliga ah sababtoo ah halkii ay ku tusin lahayd khariidadda ama bixinta tilmaamo la taaban karo, smartwatch wuxuu adeegsanayaa nidaam loo yaqaan "jawaab celinta" si loo siiyo sheekooyin toos ah oo aan loo baahnayn iyada oo aan loo baahnayn wax tarjumo gacmeed
Inkastoo wakhtigu kuu sheegi doono sida waxqabadkaani u yahay ujeeddada socdaalka, xiisaha uu abuuray nidaamka ayaa u muuqda inuu qalafsan yahay qalab cusub. Iyadoo la tixgelinayo in Apple ay tahay mid loo yaqaanno bixinta aalado tayo sare leh, tani waxay sharraxeysaa sababta dadwaynuhu ay ujoogaan xiisaha saacadda.
Siri ee isdhexgalka Bing
Muddo dheer, dadka isticmaala waxay ku tiirsan yihiin
Markaad weydiiso Siri in aad raadiso makhaayadaha burgerka ee agagaaraha, kaaliyaha dijital ayaa ku dhajin doona shaashadda iyada oo la helayo natiijooyin dhowr ah. Inkasta oo Siri ay adeegsanayso Bing si ay u bixiso natiijooyinka raadinta, suuqyada maxalliga ah waxay u badan tahay inay diirada saaraan Bing halkii ay Google ku soo jiidan lahaayeen dadka isticmaala Apple Smartwatch.
Apple Watch wuxuu ka kooban yahay Khariidadaha Apple sida nidaamka safarka hore. Sanado badan, dadka intooda badan waxay isticmaalaan Khariidadaha Google oo ay ku jiraan kuwa isticmaala iPhone. Taasi waxay u badan tahay inay isbeddesho maaddaama ay saacaddu ay u badan tahay inay kor u qaaddo jiil cusub oo ka mid ah dadka isticmaala Khariidadaha Apple. Tani waxay ka dhigan tahay in suuqyada maxalliga ah ay tahay inay qaadaan tallaabooyin lagu hubinayo in dadka isticmaala ay ka heli karaan ganacsigooda kuyaala Khariidadaha Apple
Khariidadaha Apple waxay u muuqdaan in ay leeyihiin hab ka duwan marka la barbar dhigo tartamayaasha sida Google markii ay la macaamilaan milkiilayaasha ganacsiga. Halkii aad qaadan lahayd "sheegashadaada ganacsigaaga", waxay u ogolaaneysaa milkiilayaasha ganacsiyada inay aqoonsadaan jadwalkooda oo ay siiyaan macluumaad sax ah oo ku jira buugooda.
Inkasta oo natiijooyinka raadinta maxaliga ah ay horey u sameynayaan hirarka weyn ee nidaamka hirgelinta IP-ku-galka Google, tiknoolajiyada cusub ee Apple ayaa bixin karta natiijooyin raadin oo cusub oo GPS ah. Tani waxay noqon kartaa mid caqli-gal ah, laakiin ma jirto wax khasaare ah oo lagu saadaalinayo mustaqbalka.
Kumbuyuutarada iyo saamileyda isticmaalka
Kuuboonada moobiilka ayaa horayba u heley caan ka mid ah dadka isticmaala akhbaarta casriga ah oo ay ku jiraan qaababka isdhexgalka sida QR-da. Waqtiga la joogo, dadka isticmaala waxay dalbanayaan in badan oo qaab-dhaqameedka iyo dheelitirnaanta, markaa haddii aad aragto hab aad ku dabooli karto baahidooda ka dhaqsaha badan tartankaaga, waxaad u badan tahay inaad ka hesho qayb ka weyn suuqa.
Ugu dambeyntii, aasaaska raadinta maxaliga ahi ma badali karo habeenkii, laakiin Apple Watch ayaa isbedelay sida suuq-geynta SEO-ka ee maxalliga ah loo hirgeliyey muddo sanado ah. Hadda, suuqyada iyo milkiilayaasha ganacsigu waa inay waqti dheeraad ah ku qaataan wanaajinta Khariidadaha Apple iyo Bing si ay u helaan tartan tartan ah oo ay ku tartamayaan.